Ibhodi Lezokuvakasha lase-Afrika libona i-Costa Rica njengomholi osafufusa kwezokuvakasha Komhlaba
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika » Ibhodi Lezokuvakasha lase-Afrika libona i-Costa Rica njengomholi osafufusa kwezokuvakasha Komhlaba
Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika • Izindaba Ezintsha • Izindaba zikaHulumeni • emihlanganweni • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Izindaba zaseSeychelles • Ukusimama Izindaba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Wtn
by U-Alain St. Ange
U-Alain St.Ange, uMongameli weBhodi Lezokuvakasha lase-Afrika
Ibhalwe ngu U-Alain St. Ange
Njengoba amazwe angama-52 e-Afrika engamalungu eNhlangano Yezokuvakasha Yomhlaba, leli zwekazi liyisifunda esibaluleke kakhulu ku-UNWTO uma kukhulunywa ngamavoti.
UMongameli u-Alain St. Ange ufuna i-Afrika ukuthi isukume ivote eMhlanganweni Omkhulu ozayo we-UNWTO eSpain ngemva kokuba iCosta Rica ithathe isinyathelo esinesibindi sokumela izinto obala nokungenzeleli.
“Usuku oluhle lwe-UNWTO yeBhodi Lezokuvakasha lase-Afrika kanye neWorld Tourism”
Umongameli weBhodi Lezokuvakasha lase-Afrika u-Alain St. Ange ufinyelele uMhlonishwa. Ungqongqoshe Wezokuvakasha waseCosta Rica, uMhlonishwa. UNgqongqoshe uGustav Segura Costa Sancho futhi wambonga ngombono wakhe nokungenelela ekuceleni ivoti eliyimfihlo ekulaleleni okuzayo kokuqinisekisa kwe-UNWTO yokuqokwa kukaNobhala-Jikelele.
U-Alain St. Ange, owayengungqongqoshe wezokuvakasha eSeychelles unokuhlangenwe nakho kwakhe ngenqubo yokhetho ye-UNWTO futhi wathi.
“Ngihalalisela uNgqongqoshe Wezokuvakasha waseCosta Rica ngewakhe umnyakazo wokubiza ivoti eliyimfihlo ngenqubo yokuqinisekisa eMhlanganweni-Jikelele ozayo eMadrid.”
Lokhu kuyintuthuko enhle futhi ngishayela ihlombe iCosta Rica ngokukhuphuka. Izoqinisekisa ubuqotho evotini elizayo futhi uma ivula kabusha ukhetho izoqinisekisa inqubo enobulungiswa kanye nokuncintisana kwalesi sikhundla esibalulekile kwezokuvakasha emhlabeni wonke.
Ngingathi wusuku oluhle lwe-UNWTO lwe-ATB kanye neWorld Tourism”.
Ezokuvakasha ziyimboni enkulu ebaluleke kakhulu kuMphakathi Wezizwe futhi inhlangano yethu ye-UN kumele ibonakale ihambisana nenkambiso elindelekile ekukhetheni ubuholi bayo.
Isicelo sami siwukuba i-Afrika ibambe iqhaza elibalulekile okhethweni oluzayo nokuthi amazwe abambe iqhaza futhi avotele.
Sinamalungu angama-52 e-UNWTO, okuyiphesenti elikhulu kunawo wonke kunoma yiliphi izwekazi.
Nalu uhlu lwamazwe angamalungu ase-Afrika:
IFederal Republic yaseSomalia
I-Republic yase-United yaseTanzania
Okuningi ngebhodi lezokuvakasha lase-Afrika: www.africatourismboard.com
Umthelela Wezomnotho we-COVID-19 e-Afrika: ATB Webinar
U-Alain St. Ange
U-Alain St Ange ubesebenza ebhizinisini lezokuvakasha kusukela ngo-2009. Waqokwa njengoMqondisi kanye noNgqongqoshe Wezokuvakasha njengoMqondisi Wezokukhangisa waseSeychelles.
Waqokwa njengoMqondisi kanye noNgqongqoshe Wezokuvakasha uJames Michel njengoMqondisi Wezokukhangisa eSeychelles. Ngemuva konyaka owodwa we
Ngemuva konyaka owodwa esebenza, wakhushulelwa esikhundleni sokuba yi-CEO yeSeychelles Tourism Board.
Ngo-2012 kwakhiwa i-Indian Ocean Vanilla Islands Organisation Organisation kwasungulwa iSt Ange yaqokwa njengomongameli wokuqala wale nhlangano.
Ekushintsheni kabusha kwekhabhinethi ngo-2012, uSt Ange waqokwa njengoNgqongqoshe Wezokuvakasha Namasiko awushiya phansi mhla zingama-28 kuZibandlela wezi-2016 ngenhloso yokuphokophela isikhundla sokuba nguNobhala-Jikelele weNhlangano Yezokuvakasha Yomhlaba.
Emhlanganweni omkhulu we-UNWTO owawuseChengdu eChina, umuntu owayefunelwa i- “Speakers Circuit” yezokuvakasha nentuthuko esimeme kwakungu-Alain St.Ange.
USt Annge owayenguNgqongqoshe Wezokuvakasha, Ezokuvakasha Kwezindiza, Amachweba kanye Nezasolwandle owake washiya isikhundla ngoDisemba nyakenye eyongenela isikhundla sikaNobhala Jikelele we-UNWTO. Ngenkathi isikhundla sakhe sokuqokwa noma idokodo lokuvuma ukuhoxiswa lihoxiswa izwe lakhe kusasele usuku nje ngaphambi kokhetho eMadrid, u-Alain St. Ange ubonise ubukhulu bakhe njengesikhulumi ngenkathi ekhuluma nomhlangano we-UNWTO ngomusa, ngentshiseko nangesitayela.
Inkulumo yakhe ehambayo yaqoshwa njengeyodwa yezinkulumo ezinhle kakhulu zokumaka kule nhlangano yamazwe omhlaba ye-UN.
Amazwe ase-Afrika avame ukukhumbula inkulumo yakhe yase-Uganda ye-East Africa Tourism Platform ngenkathi eyisivakashi esihlonishwayo.
NjengoNgqongqoshe Wezokuvakasha wangaphambilini, uSt An wayeyisikhulumi esijwayelekile futhi esidumile futhi wayevame ukubonwa ekhuluma nezinkundla nezingqungquthela egameni lezwe lakhe. Ikhono lakhe lokukhuluma 'ngaphandle kwesibhaxu' belihlala libonwa njengekhono elingandile. Wayevame ukuthi uthi ukhuluma ngenhliziyo.
ESeychelles ukhunjulwa ngekheli lokumaka lapho kuvulwa ngokusemthethweni isiqhingi i-Carnaval International de Victoria lapho ephinda amazwi engoma kaJohn Lennon odumile… ”ungathi ngingumphuphi, kodwa akusimina ngedwa. Ngelinye ilanga nonke niyohlanganyela nathi futhi umhlaba uyoba ngcono nibe munye ”. Abezindaba zomhlaba abebehlangene eSeychelles ngalolu suku bagijimise amagama kaSt.Ange ababa sematheni yonke indawo.
ISt Ange isethule inkulumo yosuku “Yengqungquthela Yezokuvakasha Nebhizinisi eCanada”
ISeychelles iyisibonelo esihle sokuvakasha okusimeme. Lokhu-ke akumangazi ukubona u-Alain St.Ange efunwa njengesikhulumi esifundeni samazwe omhlaba.
Ilungu le Izikhangibavakashi network.